"အခွန်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းကို တုန့်ပြန်စာပို့လိုက်တဲ့ လူမင်း - APANNPYAY
/ "အခွန်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းကို တုန့်ပြန်စာပို့လိုက်တဲ့ လူမင်း
"အခွန်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းကို တုန့်ပြန်စာပို့လိုက်တဲ့ လူမင်း
အကယ်ဒမီ လူမင်းဟာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ . . .လိပ်မူပြီး သူ့ ဖေ့ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာတွင် " ကျသင့်သည့်အခွန်များကိုတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့သောအနုပညာရှင်များစာရင်းကို . . . အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည် " ဟုရေးသားထားပါသဖြင့် ဖေါ်ပြပါ အနုပညာရှင် (၁၉) ဦးမှလွဲ၍ ကျန်အနုပညာရှင်များသည်အခွန်လုံးဝထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိဟုအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေပါသည် ။ သို့သော် ကျွန်တော်အပါအဝင် နှစ်စဉ်အခွန်ထမ်းဆောင်သော အနုပညာရှင်များစွာရှိနေပါသေးသည် ။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်ဆုံးရန်လည်း ရက်အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသည်ဖြစ်ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာ နှစ်အတွက်သာထမ်းဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေခြင်းများလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိအခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ယခုနှစ်အတွက်လည်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောလ အနည်းငယ်ကပင် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးအရာရှိများနှင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ အခွန်ထမ်းဆောင်ရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ပါ၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ပါရန် (ဖေါ်ပြပါစာရင်းတွင်မပါရှိသေးသော ) အခွန်ထမ်းအနုပညာရှင်များ၏ကိုယ်စား ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
#credit-Ayarwady Lu min
အကယျဒမီ လူမငျးဟာ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာနသို့ . . .လိပျမူပွီး သူ့ ဖဘှေ့တျချ စာမကျြနှာမှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယျ။
အသိပေးကွညောခကျြထုတျပွနျရာတှငျ " ကသြငျ့သညျ့အခှနျမြားကိုတာဝနျကပြှေနျစှာထမျးဆောငျခဲ့သောအနုပညာရှငျမြားစာရငျးကို . . . အသိပေးကွညောအပျပါသညျ " ဟုရေးသားထားပါသဖွငျ့ ဖျေါပွပါ အနုပညာရှငျ (၁၉) ဦးမှလှဲ၍ ကနျြအနုပညာရှငျမြားသညျအခှနျလုံးဝထမျးဆောငျခွငျးမရှိဟုအဓိပ်ပါယျသကျရောကျနပေါသညျ ။ သို့သျော ကြှနျတျောအပါအဝငျ နှဈစဉျအခှနျထမျးဆောငျသော အနုပညာရှငျမြားစှာရှိနပေါသေးသညျ ။
ယခုဘဏ်ဍာနှဈ ကုနျဆုံးရနျလညျး ရကျအနညျးငယျကနျြရှိနသေေးသညျဖွဈရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ်ဍာ နှဈအတှကျသာထမျးဆောငျရနျကနျြရှိနခွေငျးမြားလညျးဖွဈနိုငျပါသညျ ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ်ဍာနှဈအထိအခှနျထမျးဆောငျခဲ့ပွီးဖွဈ၍ယခုနှဈအတှကျလညျးဆကျလကျထမျးဆောငျသှားမညျဖွဈပါသညျ။
လှနျခဲ့သောလ အနညျးငယျကပငျ သကျဆိုငျရာအခှနျဦးစီးအရာရှိမြားနှငျ့ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး တို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေး၍ အခှနျထမျးဆောငျရနျစညျးရုံးလှုံ့ဆျောမှုမြားပွုလုပျလကျြရှိပါသညျ။
သို့ပါ၍ အမြားပွညျသူသိရှိနိုငျပါရနျ (ဖျေါပွပါစာရငျးတှငျမပါရှိသေးသော ) အခှနျထမျးအနုပညာရှငျမြား၏ကိုယျစား ပွနျလညျရှငျးလငျးတငျပွအပျပါသညျ။